musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Hawaii Kupwanya Nhau » Hawaii inoti zvakanaka kune COVID-19
Kuputsa Kufamba Nhau • Bhizinesi Kufamba • Hawaii Kupwanya Nhau • Health News • Hospitality Industry • Hotera & Resorts • nhau • vanhu • ushanyi • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Kufamba Wire Nhau • USA Kuputsa Nhau • Wtn
Hawaii Tourism inobvumira misangano, magungano, michato kudzokera kune Aloha State - nechivimbo
John De Fries, mutungamiri uye CEO weHawaii Tourism Authority
WIth Gavhuna weHawaii Ige achizivisa kusimudzwa kwezvirambidzo zvechimbichimbi munzvimbo kubva muna Zvita, maski anochengetedza uye mitemo yakachengeteka yekufamba icharamba iripo.
Indasitiri yemisangano zvakadaro ichabvumidzwa kuvhurwazve.
Sarudzo yezvirambidzo ichabva kuHurumende kuenda kuChitsuwa County.
Kutevera maitiro enyika muUnited States, the Aloha State of Hawaii zvakare iri kuzivisa COVID-19 kuti isisiri kutyisidzira kwakanyanya kudaro.
Tourism inofanira kuenderera mberi uye kuwedzera. Iri bhizinesi rekutanga maitiro nderekugamuchira nhau, kunyanya kuStates MICE indasitiri, senge mahotera ane nzvimbo dzekusangana, nzvimbo yegungano, uye nzvimbo dzemisangano.
Kunyangwe idzi dziri nhau dzakanaka dzekushanya, vamwe vari kutyira kuti dzinogona kupedzisira dzadzokera kumashure, kunyangwe zvakataurwa nezviremera, mitemo yekuvhura zvakare ichave iripo kuti igare. Hurumende inotarisira kuti vimbiso iyi ichadzorera chivimbo kune chikamu.
Hawaii inoti ine rekodhi-yakakwira nhamba yevanhu vakabaiwa asi vachitarisa kuti vazhinji vakabaiwa muHurumende vanogara kumwe (vekumusha kana kunze kwenyika) vawana pfuti yavo muHawaii uye vava kuverengerwa kuve pakati pevagari vemuHawaii miriyoni imwe nemazana mana- chii chisiri chokwadi. .
eTurboNews akabvunza mubvunzo uyu kakawanda, uye mhinduro yakajeka yakanga yadziviswa naGavhuna, mameya, uye HTA.
Kunyangwe huwandu hwerufu husina kupfava kunyangwe nejekiseni, uye huwandu hwehutachiona huri kuenderera mberi zvine mwero, Hawaii inotevera maitiro enyika mukutarisisa nhamba idzi kudzosa bhizinesi.
Hawaii Gavhuna David Ige nhasi abatana neMameya eHawaii mukuzivisa kusimudzwa kwezvirambidzo zvakawanda zvedenda musi waZvita 1, zvichiratidza kuti Hawaii yavhurwazve bhizinesi.
Island County meya vanozokwanisa kuseta yavo yega mitemo yekukurumidzira pasina kuwana mvumo kubva kuna Gavhuna
Mitemo inotevera yekuchengetedza icharamba iripo.
Iyo Hawaiʻi Safe Travels Chirongwa, inoda bvunzo kune vasina kubaiwa vafambi.
The indoor mask mandate;
Iyo yekudzivirira kana yekuyedza zvinodiwa kune mukuru wehurumende nevashandi vedunhu; uye
Iyo yekudzivirira kana yekuyedza zvinodiwa kune makondirakiti nevashanyi kunzvimbo dzehurumende.
"Matanho aya anoshanda kumutsiridza indasitiri yedu yevashanyi panguva yakakodzera, nehuwandu hwemajekiseni enyika yedu huri pakati pepamusoro-soro munyika, pamwe chete nedziviriro dzehutano dzevafambi vepamba dzinodiwa neHawaii's Safe Travels chirongwa. Izvo zvakagadziridzwa zvirambidzo zvemubatanidzwa pane vanosvika kune dzimwe nyika uye kuenderera mberi kwechisungo chemukati cheHawaii chinopa dzimwe dziviriro, "akadaro Mutungamiriri weHawaii Tourism Authority (HTA) Mutungamiriri & Chief Executive Officer John De Fries.
Pamusoro pechiziviso chanhasi kubva kuna Gavhuna, Meya weHonolulu, Rick Blangiardi, akazivisa kusimudzwa kwezviganho uye kufambiswa kwevanhu munharaunda yezviitiko paOahu, kiyi yekutangisazve misangano nemagungano kuHawaii Convention Center nenzvimbo dzakasiyana dzekutandarira.
Iyo yakakura kwazvo inoyangarara maindasitiri epasi
Kuvharika kwakazara, kunosungirwa nyika yose yekudzivirira mu...
Belgium, USA, UK: Iye zvino nyika dzepamusoro dzeMasangano ...
Chiso Chako ndiyo ID yako nyowani yekufamba: Biometrics yakanaka!
New Calgary to Seattle ndege paWestJet izvozvi
Black Friday bongozozo muLondon sezvo vatyairi veTube vanorova
Israel inorambidza vashanyi kubva kunyika nomwe dziri kumaodzanyemba...
IMEX America Yakawanikwa Iine Mhosva! Misangano Mitsva uye...
Kuenda kuUS? COVID muganhu matanho anoramba aripo ...
International Tourism Inosvika muAfrica uye ...
India Civil Aviation Inoita Paradigm Shift ku ...